Madaxweyne Siilaanyo Oo Kulan La yeeshay Safiirka Maraykanka u qaabilsan Arimaha Somaliland/Somalia | FooreNews
Home wararka Madaxweyne Siilaanyo Oo Kulan La yeeshay Safiirka Maraykanka u qaabilsan Arimaha Somaliland/Somalia
Madaxweyne Siilaanyo Oo Kulan La yeeshay Safiirka Maraykanka u qaabilsan Arimaha Somaliland/Somalia
fooreJan 25, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)-Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Maraykanka u qaabilsan Somaliland/Somalia, oo socdaal laba maalmood ah ku yimid dalka.
Afhayeenka Madaxtooyada Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse) ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray kulanka uu Madaxweynuhu la yeeshay Safiirka Maraykanka waxaanu u dhignaa sidan:-
“Madaxweynaha JSL, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa uu Maanta Qasriga Madaxtooyada ku qaabilay Safiirka Maraykanka u Qaabilsan Somaliland iyo Somalia Mr. James Swan oo booqasho 2 maalmood ah ku yimid Somaliland. Arrimaha ay ka wada hadleen waxa ka mid ah nabadgelyada guud ee geeska Afrika iyo saamaynta ay ku leeyihiin argagixisada iyo budhcadbadeedu.
Waxay kaloo ka wada hadleen xidhiidhka wada shaqayneed ee ka dhexeeya Dawlada Maraykanka iyo Somaliland oo soo xoogaysanayay mudooyinkii dambe, iyo sidii loo kordhin lahaa iskaashiga.
Wuxuu Madaxweynuhu ka mahadceliyay taageerada ay dawladda Ingiriisku u fidiso Somaliland ee dhinacyada adeegyada bulshada iyo kor-u-qaadida ilaha dhaqaalaha oo Madaxweynuhu ku tilmaamay inay yihiin halbawlaha horumarka dalka.
Dhinaca kale Safiirka Dawlada Maraykanka ee Fadhigiisu yahay magaalada Nairobi Md. James Swan waxa uu tilmaamay in dawladiisu ay dhiiri-gelinayso horumarka la taaban karo ee ka taabo qaaday Somaliland ee dhinacyada badan leh, wuxuuna sheegay in dawladiisu sii kordhin doonto wada shaqaynta iyo taakulaynta ay u fidiso omaliland, iyada oo ka duulaysa siyaasada Maraykanka ee mandaqada ee laba geesoodka ah, oo u fasaxaysa Maraykanku intuu si toos ah ula shaqeeyo Somaliland.
Inta uu safiirku wadanka ku sugan yahay waxa uu la kulmayaa masuuliyiin ka tirsan qaybaha kala gedisan ee wadanka, waxaana uu soo kormeeri doonaa mashaariicda ay maalgeliso dawlada Maraykanku ee ka socda.
Previous PostXukuumada Iyo Ururka Suxufiyiinta Somaliland Oo Gaadhay heshiis 5 qodob ah Next PostMaxkamada dambiyada dagaalka oo ku dhawaaqday 4 masuul oo Kenyan ah oo la horgeyn doono